आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषालाई नै परिमार्जित गर्नुपर्छ - Karobar National Economic Daily
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषालाई नै परिमार्जित गर्नुपर्छ
query_builderAugust 31, 2017 9:30 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility582
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेका र कामको अनुभवसमेत बटुलिसकेका गिरिराजमणि पोखरेल अहिले स्वास्थ्य मन्त्री भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका अनुभवी नेता पोखरेल महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
स्थ्यमन्त्रीका रूपमा यो उनको तेस्रो कार्यकाल हो । पोखरेल दोस्रो जनआन्दोलनपछि गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा २०६३ साल वैशाख १२ गते पहिलो पटक स्वास्थ्यमन्त्री बनेका थिए ।
दोस्रो पटक उनी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको निर्वाचित सरकारमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री थिए । यसअघि शिक्षामन्त्रीसमेत बनिसकेका मन्त्री पोखरेलले गत महिना स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै आफ्नो २६ बुँदे प्रतिबद्धतासमेत प्रस्तुत गरिसकेका छन् । तेस्रो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालय सम्हाल्नासाथ स्वास्थ्य क्षेत्रमा कत्तिको सुधार ल्याउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
विगतमा मन्त्रालयको अनुभव बटुलिसकेको अधारमा पनि मन्त्री पोखरेलले छोटो अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनेकौं चुनौती सामना गर्दै कटिबद्ध भएर लाग्ने बताउँदै आएका छन् । यिनै स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग स्वास्थ्य क्षेत्रकै विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी जुनु भट्टराईले गरेको कुराकानीको सार :
तेस्रो पटक स्वास्थ्यमन्त्री बनिसक्नुभएको छ, अरू मन्त्रीलाई भन्दा तपाईंलाई काम गर्न पक्कै पनि सहज हुनुपर्छ, के छन् तपाईंका योजना ?
मैले मूल रूपमा २६ बुँदे प्रतिबद्धतामार्फत आफ्नो मार्गचित्रण प्रस्तुत गरिसकेको छु । त्यो मार्गचित्रका आधारमा एक्सन प्लान पनि बनिसकेको छ । त्यही एक्सन प्लानका आधारमा जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी गइरहेका छौं ।
कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा एउटा नियमित चल्ने प्रक्रिया हुन्छ, एउटा आफूले सोचेको दिशामा जाने हुन्छ भने अर्को आकस्मिक रूपमा आउने हुन्छ । म मन्त्री हुँदा डा. गोविन्द केसी अनशनमा हुनुहुन्थ्यो ।
चलिरहेको प्रणाली सुधार गर्ने र कार्ययोजनालाई एक–एक गर्दै कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेका छौं ।
सुरुको समयमा एक प्रकारले हाम्रो मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने भए पनि मेरो आफ्नो पनि शिक्षामा ज्ञान भएकाले त्यो मुद्दाचाहिँ नेपालको समग्र स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवासँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने भएकाले पनि म त्यसमा लागिपरेको थिएँ । अब त्यो प्रक्रिया चल्दाचल्दै बाढीको समय आयो । अविरल वर्षाका कारण २६ वटा जिल्ला प्रभावित भए ।
नागरिकको मृत्यु, बेपत्ताबाहेक अत्यन्तै ठूलो क्षति छ, जुन प्रकोप आएपछि रोक्ने भन्दा प्रकोप नै आउन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ काम गर्न दुई हप्तादेखि म निरन्तर तराईमै छु । त्यसैले पनि मैले ल्याएका प्राथमिकतासहितका कामलाई निरन्तरता दिन पाएको छैन । तैपनि बीचमा स्वास्थ्य बिमा विधेयक पार्लियामेन्टमा गएको छ ।
स्वास्थ्य नीति बनाउने आयोग क्याबिनेटमा गएको छ, त्यो पनि औपचारिक सहमति भइसकेको छ, अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतीक्षामा छौं, अब चलिरहेको प्रणाली सुधार गर्ने र कार्ययोजनालाई एक–एक गर्दै कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेका छौं । एक खालको संक्रमणकालीन सरकार हो, चुनावको पनि एक खालको जिम्मेवारी र दायित्व छन् । १ महिनाका काम र निर्णय चाँडै सार्वजनिक गर्नेछु ।
तपाईंले २६ बँुदे प्रतिबद्धता पत्र बाहिर ल्याउनुभयो, यो संक्रमणकालीन सरकारमा तपार्इंको फोकस नयाँ नीतिगत कार्यमा हुन्छ कि भइरहेको नीतिगत कार्यहरूलाई निरन्तरता दिनेमा हुनेछ ?
स्वास्थ्य भन्ने विषयमा संक्रमणकाल हुँदैन, पहिले हामीले यसरी बुझ्नुप¥यो, यो त जनताको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ । अरू कुरा संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखिसकेपछि जुन दिन संविधान घोषणा भो, त्यो दिनदेखि त्यसका आधारमा कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले हाम्रो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको यो शासकीय अधिकार र कर्तव्य बाँडफाँड गरिएकाले पुरानोबाट नयाँमा लान त्यसका केही संघीय संरचना संक्रमणात्मक हुने भए । कतिपय विषयवस्तु दीर्घकालीन हन्छन् । आज गरेका कतिपय काम तत्कालसँग सम्बन्धित पनि हुन्छन् । जस्तो, हाम्रो नसर्ने रोग र सर्ने रोग । सर्ने रोगबाट हामी लामो समयदेखि ग्रसित छौं, अझै मुक्त हुन सकेका छैनौं ।
स्वास्थ्य भन्ने विषयमा संक्रमणकाल हुँदैन, यो त जनताको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ ।
नेपाली समाजको मूल प्रवृत्ति रोगका कोणबाट हेर्दा नसर्ने रोगको प्रकोप दिनानुदिन बढ्दै गएको पाइन्छ । यसका लागि नीति नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसबाहेक मानसिक स्वास्थ्य नीति पनि बनाएर काम सुरु गर्नु छ । त्यस्तै, अन्य पर्यावरणीय जीवन पद्धति छन् । यस्ता कतिपय विषयलाई आज मैले काम सुरु गर्न सक्ने म सुरु गरिहाल्छु ।
दीर्घकालीन ढंगले अगाडि बढाउने विषयहरूका लागि स्वास्थ्य स्वास्थ्य नीति बनाउँदै छौं । बन्दै गरेको स्वास्थ्य नीतिमा २०७१ मा बनेको स्वास्थ्य नीतिका राम्रा पक्षहरूलाई लिएर थप्नुपर्ने कुरा थपेर नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउँदै छौं । दुवै अर्थबाट यो बुझ्नुपर्छ ।
संसद्मा विचराधीन भएको चिकित्सा शिक्षा ऐन छ, त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कति समेट्छ ?
स्वास्थ्य सेवाका केही अवयव हुन्छन्, ती अवयवहरू मिलेर मात्र प्रणाली बन्छ, जसमा क्रमशः जनशक्ति, औषधि, उपकरण, पूर्वाधार, समुदायको भूमिका पर्छन् । यो स्वास्थ्य प्रणालीको मुख्य अङ्ग जनशक्ति भयो र चिकित्सा शिक्षाभन्दा साँघुरो अर्थ लाग्न सक्छ, त्यसैले यसलाई समग्र स्वास्थ्य शिक्षाकै ऐन भनेर बुझौं । यही चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यापकतालाई समेट्न खोजिएको छ ।
व्यापकता समेट्ने खालको गुणमा आधारित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएपछि यसले स्वास्थ्य प्रणलीमा व्यापक परिवर्तन ल्याउँछ । त्यसकारण यसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ, सेवासँग मैले त्यसरी बुझेको छु ।
तपाई शिक्षामन्त्री पनि बनिसक्नुभएको छ, जुन परिकल्पना गरेर चिकित्सा शिक्षा ल्याइएको थियो, एकातिर चिकित्सा शिक्षालाई सरकारीकरणको पाटोमा लानुपर्छ भनिरहेका छौं, अर्कातिर राज्यको नीतिले खुल्ला अर्थतन्त्र बजारलाई अविलम्ब गरेको छ, नीतिमा तालमेल नमिलेको हो ?
हाम्रो संविधानको मूल अवधारणा तीनखम्बे नीति छ, खुला बजार मात्र छैन । यसले सरकारी, निजी र सहकारीलाई बाटो देखाएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोका आधारमा सबै कुरा बजारले निर्धारण गर्दैन । त्यसैले राज्यको लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना पनि यसैमा छ । यसका मौलिक हकका व्यवस्थाहरू सा¥है सुन्दर छन् ।
तीन वर्षभित्र सबैको ऐन बनाएर लागू गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तो विषयलाई अरू व्यापारजस्तो खरिद–बिक्रीको विषय बनाउनु हुन्छ कि हँुदैन भनेर अहिले ठूलो बहसको विषय बनिसकेको छ । मूलभूत रूपमा त्यस्तो प्रणाली निर्माण गर्न सकियोस्, जसले सरकारी, निजी तथा सहकारीले पनि यदि यो क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्छ भने एउटा गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्नुप¥यो ।
सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेजको प्र्रक्रिया त अगाडि बढिसकेको छ । यसले हाम्रो समस्याको समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने कोणबाट हेर्नु पनि जरुरी छ ।
अर्को, गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थीहरूले सो क्षेत्रमा सरकारको अनुदानमा बढीभन्दा बढी अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरून् र यो सापेक्षतामा अलिकति खर्चिलो पद्धति छ, यसको व्ययभारचाहिँ राज्यले बोक्नुपर्छ, जसले गर्दा अहिले कम्तीमा ५० प्रतिशत व्यवस्था गर्दै बिस्तारै त्यसलाई बढाएर अगाडि बढौं भन्ने हो, त्यस कारण सुदूर भविष्यमा हामी एउटा राम्रो लोककल्याणकारी राज्य त्यहाँभित्र पनि बजार चलेको छ, ४६ को परिवर्तनपछि उदारीकरण र निजीकरणले निर्धारित गरेको बाटोले तपाईंले भनेजस्तो अन्तद्र्वन्द्व ल्यायो, तर ७२ ले ल्याएको नीतिले नयाँ बाटो ल्याएको छ, अब हामी त्यता जानुपर्छ ।
अहिले सात प्रदेशमै सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने विषय बहसमा छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतकै चारवटा प्रतिष्ठान छन्, तिनीहरूकै आंगिक क्याम्पस चलिरहेको अस्पतालमा चलाउन सजिलो होला कि छुट्टै मेडिकल कलेजमा चलाउन सहज होला ?
यो विषय हामी आफैं पनि यहाँको स्वास्थ्य सेवाको कोणबाट जनशक्तिको आवश्यकता र त्यसको निरन्तर प्रवाह कुन मोडलबाट राम्रो हुन्छ भन्ने बहसको विषय छ । स्वास्थ्यमन्त्री भए पनि यो विषयलाई स्वास्थ्यका कोणबाट मात्र हेर्दिनँ । हामी संघीयतामा गएको स्थितिमा हामीले कसरी जनशक्तिलाई समुचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट पनि हेर्नु जरुरी छ ।
जुनसुकै प्रक्रियामा पनि राम्रो–नराम्रो दुवै पक्ष हुन्छन् । सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेजको प्र्रक्रिया त अगाडि बढिसकेको छ । यसले हाम्रो समस्याको समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने कोणबाट हेर्नु पनि जरुरी छ । विगतमा यिनै सरकारी प्रणाली प्रयोग गरेर निजी र नाफा कमाउन दिइएको कोणबाट त्यो राज्यले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले यो विषयलाई लगे धेरै नाफामूलक संस्था आइराख्ने स्थिति आउँदैन ।
भनेपछि स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विशेषीकृत शिक्षालाई बिस्तारै सरकारीकरणमा ल्याउन सम्भव छ ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता गौण विषयलाई हामीले एकीकृत ढंगले सोच्नुपर्छ । कृषिमा पछिल्ला समस्या हेर्नुस्, विषादीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा कति ठूलो समस्या आएको छ । किसानको अधिकार छ भनेर जे पनि उत्पादन गर्न दिन मिल्छ र ?
मान्छेको जीवन पनि नष्ट भयो अनि जमिनको पनि । त्यसैले पनि यसमा कुन–कुन क्षेत्रमा राज्यले दायित्व लिनुपर्ने हो र कुन–कुन क्षेत्रलाई निजी वा सहकारी जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भने पक्कै आएको छ । तर, यस्ता विषयमा एउटा सार्थक बहस गरेर राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाएर मात्र अगाडि बढ्नु अत्यन्तै जरुरी छ ।
कुन–कुन क्षेत्रमा राज्यले दायित्व लिनुपर्ने हो र कुन–कुन क्षेत्रलाई निजी वा सहकारी जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भने पक्कै आएको छ ।
तीन पटकसम्म स्वास्थ्यमन्त्री बनिसक्नुभएको छ, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्ता समस्या जुन अहिलेसम्म पनि दोहोरिरहेको पाउनुभएको छ ?
निश्चित रूपमा नै जुनसुकै जिम्मेवारीमा आउँदा पनि त्यहाँको क्षेत्र बुझ्न विद्यार्थी हुनुपर्छ । मैले गिरिजाबाबु र प्रचण्ड सरकारमा बसेर काम गरिसकेकाले अहिले सुरुको दिनदेखि नै काम गर्न सजिलो त भएको छ । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या थुप्रिरहेका हुन्छन् । ती पहिलेको बुझाइले पछिल्ला समस्यालाई समेटिरहेका हुँदैनन् । त्यसैले यो अन्तर्विरोध पनि हुन्छ ।
स्वास्थ्यका मुख्य समस्यामध्ये अहिले स्वास्थ्यमा सबैको पहुँचकै कुरा हो । अहिले पनि नेपालका सबै उमेर समूहका, उत्पीडनमा परेका समुदायले स्वास्थ्यको समान पहुँच पाएका छैनन् । मात्रात्मक रूपमा त विकास भएको पनि छ, तर त्यो विकासप्रति विश्वास आर्जन हुन सकेको छैन । तेस्रो कुरा भएको गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पनि आमनागरिकको आर्थिक रूपमा धान्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
योबाहेक नेपालको भौगोलिक विकटताको दृष्टिले पनि समस्या भिन्नाभिन्नै प्रकृतिको छ । हामी समस्यालाई विभिन्न कोणबाट विभाजन गरेर हेर्छौं । त्यसलाई हेर्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषालाई नै परिमार्जित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अर्कातिर हामी संघीय संरचनामा जाँदैछौं । संघीयतामा जाँदै गर्दा केही संक्रमणकालीन समस्या छन् । अन्य समस्याका पनि सूची छन् । जस्तो, हामीले सही तरिकाबाट जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । जुन प्रणालीबाट आएका छन् उनीहरूमा पनि एकै प्रकारको कामप्रतिको समर्पण, बुझाइ, जिम्मेवारी बहन भइरहेको छैन ।
अब औषधिजस्तो खरिद गर्ने सन्दर्भमा त हामीकहाँ समस्या छ, बजेट छ तर समयमा खरिद हुन्न । खरिद भए पनि कमजोर खालको खरिद भइरहेको छ । जहाँ पनि औषधिको अभाव छ भन्ने बाहिर सुनिन्छ, यो पनि गम्भीर समस्या हो । त्यसबाहेक अस्पताल क्षमताका छन्, तर न्यूनतम पूर्वाधारसमेत छैनन् । अनुसन्धानमुखी संरचना छैनन् ।
राज्यको लगानी रोग लाग्न नदिने भन्दा उपचारात्मकतिर बढी जोड दिएको देखिन्छ, यसरी धान्न सक्ला त राज्यले ?
हो वास्तवमै । हामी रोग लाग्न नदिने बारेमा भन्दा उपचारात्मकतिर गएका छौं । पछिल्लो समयमा नसर्ने रोग बढ्दै गएको अवस्थामा मानिसको जीवनशैलीसँग जोडिएका कोणबाट हेर्नु एकदमै आवश्यक देखिएको छ । हाम्रो आफ्नै खालको चिकित्सा पद्धति थियो । भन्ने बेलामा आयुर्वेद पद्धतिलाई चिकित्साको धरोहर भन्छौं तर त्यो अहिले कमजोर अवस्थामा छ ।
भनेपछि यी सब एक गम्भीर समस्या र चुनौतीका रूपमा खडा भएका छन् । अबको राज्यले स्वास्थ्यमा लगानी गर्दा यस्ता विषयलाई सोचेर रोग लाग्न नदिने खालका कार्यक्रमतर्फ बढी जोड दिनु आवश्यक देखिएको छ ।
सरकारले निःशुल्क औषधि, विपन्न नागरिकलाई उपचार सहुलियत उपचार नीति पनि सुरु ग¥यो, तर त्यसकोे पहुँचमा भने विपन्नभन्दा हुनेखानेको हालीमुहाली देखिएको छ, यो हाम्रो समग्र स्वास्थ्य नीतिको खराबी हो कि नियतको ?
पहिले त ०४६ सालपछि स्वास्थ्यलाई पनि खरिद बिक्रीको विषय बनाइएको थियो । हाम्रो सरकारी प्रणाली पनि त्यसै दिशातर्फ गएको देखिन्थ्यो । यता हामी अन्तरिम संविधानबाट अधिकारका आधारमा यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गरियो ।
त्यही क्रममा राष्ट्रिय निःशुल्क औषधिको कार्यक्रम आयो । त्यो कार्यक्रमसँगै हामीले मृगौला, मुटुरोग, क्यान्सरलगायतका ५ र अहिले ३ थपेर ८ ठूला रोगको सन्दर्भमा गरिब तथा विपन्नलाई सांकेतिक सहयोग गरिएको थियो । तपार्इंले भनेजस्तो यो लक्षित वर्गले पाए कि पाएनन् भनेर पुनरावलोकन गर्ने समय आइसकेको छ ।
सबैका लागि स्वास्थ्यको नारा दिएर राज्यले जिम्मा लिएपछि लक्षित वर्गलगायत सबैले सेवा पाए–नपाएको सम्बोधन गर्नैपर्छ, हामी यसमा लागिरहेका पनि छौं । यस्ता विषय हामीले हरेक १० वर्षमा रिभ्यु गर्नैपर्छ । नयाँ आएका कुरालाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्दै लाने प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ ।
गरिब तथा बिपन्नको पहुँचको सम्बोधन अब सम्भवतः स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्छ । बिपन्न तथा गरिब पहिचान भएका नागरिकको प्रिमियम रकम राज्यले तिरिदिने भएकाले उनीहरू उपचारको पहुँचमा पुग्नेछन् ।
स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारिता देखाइरहँदा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गरिएका तीन जिल्लाका ५० प्रतिशत बिमितले नवीकरण नै गरेनछन्, बिमा कार्यक्रममा राज्य कहाँनेर चुक्यो ?
हो, मैले बिमाको सबै बिल लगिसकेको छु । ती बिलका सन्दर्भमा पनि मैले सुरुका दिनमा प्रस्तुत गरेको २६ बुँदे प्रतिबद्धतामा केही अन्तर्विरोध छन् भन्ने कुरा मैले राखेको थिएँ । बिमा कार्यक्रममा सञ्चालन भइरहँदा हामीले दिइरहेको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय छैन, कतिपय ठाउँमा उपकरण छैनन्, भएको ठाउँमा उपकरण चलाउने प्राविधिकको पनि समस्या देखिएको छ ।
त्यसै पनि स्वास्थ्यमा जनशक्ति, पूर्वाधार, क्षमता विस्तार र सेवाको गुणस्तर बढाउने जस्ता विषयमा चुनौती धेरै छन् । ती सबै कारक तŒवहरू बिमितले नवीकरण नगर्नुका कारण हुन् । त्यसैले मलाई पहिलो विधेयकलाई ऐन बनाउन दिनुहोस् ।
म यस्ता विषयहरू संसद्को सहमतिद्वारा टुंग्याउँछु । हाम्रो जस्तो देशमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यले लिएपछि जनताको ठूलो चिन्ता दोस्रो तह र तेस्रो तहको विषेशज्ञ सेवामा पनि खोजी गरिएको छ । विस्तृत सुविधा दिने अस्पतालहरू विस्तार नभई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सफल हुँदैन । यसलाई सफल बनाउने गरी लैजानुपर्छ ।
शिक्षामा हुँदा गोविन्द केसीको विषयमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । फेरि नेसनलको सम्बन्धन खारेज नभए २१ गतेबाट पुनः अनशन बस्ने अल्टिमेटम केसीले दिएका छन् । अब डा. केसी अनशन बस्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन ?
डा. केसीले पछिल्लो अनशन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रस्ताव लगेपछि स्थगित गर्नुभएको हो । तराईको प्राकृतिक प्रकोपको अवस्था हेरेर पनि उहाँले अनशन स्थगित गर्नुभयो, अनशन स्थगित गर्न मैले अपिल पनि गरेको थिएँ । अब यो विषय प्रधामन्त्रीको तहमा पुगिसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपूर्व यी कुरा नआउँदा पनि मैले यी विषय उठाइसकेको थिएँ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले पहल पनि गर्नुभएको छ । मलाई लाग्छ, अब उहाँले पुनः अनशन बस्ने परिस्थिति आउँदैन । सरकारले यो विषयमा पहल गर्छ ।
सबैका लागि स्वास्थ्यको नारा दिएर राज्यले जिम्मा लिएपछि लक्षित वर्गलगायत सबैले सेवा पाए–नपाएको सम्बोधन गर्नैपर्छ ।
विश्वविद्यालयले नेसनललाई दिएको सम्बन्धनका बारेमा अस्पताल सञ्चालकको अनुमति स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिन्छ । सुरुमा केही अलमल भए पनि ७० सालपछि त्यस्तो अस्पष्टता अन्त्य भइसकेको छ । हामीले एउटा उच्चस्तरीय टोली बनाएका छौं । त्यसको चाँडै रिपोर्ट आउँछ । हामी गुणस्तरमा आधारित भएर अगाडि बढिरहेका छौं । आवश्यक परेको खण्डमा आवश्यक निर्णय लिन्छौं ।
अन्त्यमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक २१ गतेभित्र पास हुने सम्भावना छ कि छैन ?
संसद्को आफ्नो प्रक्रिया छ । हामी कार्यतालिकामा छौं । सांसद हुँदाहुँदै मन्त्री पनि भएकाले मन्त्रीको कोणबाट बोलिरहेको छु । पछिल्लो विधेयक बालबालिका, समाजकल्याण, ज्येष्ठ नागरिक समितिले जे बनायो त्यो पनि एक समितिकै आधारमा बनाइएको थियो ।
अहिले पनि त्यसमा केही मिलाउनुपर्ने छन् भने, सुधार गरेर जानुपर्ने छ भने त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका साथीहरूले काम गरिरहनुभएको छ । यसमा हिजो एउटा सहमति भएको थियो । पछिल्लो समय घटेका घटनाका कारणले पनि ती सहमतिहरूलाई अझै मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
स्वास्थ्य स्वास्थ्यमन्त्री शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल